Soo-saareyaasha Waxyaabaha Muhiimka ah & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshadaha Waxyaabaha ugu Muhiimsan
Ilaaliyaha ilayska Thrie
Gawaarida ayaa badanaa ah in la raaco AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 iyo heerka EN1317. Waxyaabaha loogu talagalay taasi badanaa waa Q235B (S235Jr xoogga dhalidda ayaa ka badan 235Mpa) iyo Q345B (S355Jr xoogga dhalidda ayaa ka badan 345Mpa). Dhumucda gaadhka ilaalada inta badan ilaa 2.67mm ilaa 4.0mm. Daaweynta dusha sare waa la galiyay galvanized, si loo raaco AASHTO M232 iyo heerka loo siman yahay sida AASHTO M111, EN1461 iwm.
Gawaarida ayaa badanaa ah in la raaco AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 iyo heerka EN1317. Waxyaabaha loogu talagalay taasi badanaa waa Q235B (S235Jr xoogga dhalidda ayaa ka badan 235Mpa) iyo Q345B (S355Jr xoogga dhalidda ayaa ka badan 345Mpa). Dhumucda gaadhka ilaalada inta badan ilaa 2.67mm ilaa 4.0mm. Daaweynta dusha sare waa la galgaliyay kulul, si loo raaco AASHTO M232 iyo heerka loo siman yahay sida AASHTO M111, EN1461 iwm.
Boostada ayaa inta badan la raacayaa AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 iyo heerka EN1317. Waxyaabaha loogu talagalay taasi badanaa waa Q235B (S235Jr xoogga dhalidda ayaa ka badan 235Mpa) iyo Q345B (S355Jr xoogga dhalidda ayaa ka badan 345Mpa). Dhumucda gaadhka ilaalada inta badan 4.0mm ilaa 7.0mm ama raac macaamiisha dalab. Daaweynta dusha sare waa la galgaliyay kulul, si loo raaco AASHTO M232 iyo heerka loo siman yahay sida AASHTO M111, EN1461 iwm boostada ayaa lagu rakibay ...
Boostada ayaa inta badan la raacayaa AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 iyo heerka EN1317. Waxyaabaha loogu talagalay taasi badanaa waa Q235B (S235Jr xoogga dhalidda ayaa ka badan 235Mpa) iyo Q345B (S355Jr xoogga dhalidda ayaa ka badan 345Mpa). Dhumucda gaadhka ilaalada inta badan 4.0mm ilaa 7.0mm ama raac macaamiisha dalab. Daaweynta dusha sare waa la galiyay galvanized, si loo raaco AASHTO M232 iyo heerka loo siman yahay sida AASHTO M111, EN1461 iwm boostada ayaa lagu rakibay int ...
Wareegga qaabka wareega
Dhamaadka terminalku wuxuu badanaa raacaa AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 iyo heerka EN1317. Waxyaabaha loogu talagalay taasi badanaa waa Q235B (S235Jr xoogga dhalidda ayaa ka badan 235Mpa) iyo Q345B (S355Jr xoogga dhalidda ayaa ka badan 345Mpa). Dhumucda dhamaadka terminal badanaa iyada oo loo marayo 2.5mm ilaa 4.0mm ama raac macaamiisha dalabka. Daaweynta dusha sare waa la galiyay galvanized, si loo raaco AASHTO M232 iyo heerka loo siman yahay sida AASHTO M111, EN1461 iwm terminal e ...
Boolal ayaa lagu qeexay ANSI B1.13M dulqaadka Fasalka 6 g. Qalabka Bolt wuxuu u dhigmaa ASTM F568M ee Fasalka 4.6. Waxyaabaha loogu talagalay boodhadhka u adkaysta daxalka waxay u dhigantaa ASTM F 568M ee Fasalka 8.83. handarraabbadeedii Daaweynta dusha sare waa inay raacdaa AASHTO M232. Cabirka caadiga ah ee dhaqe waa 76 * 44 * 4mm, waana raaci karnaa sawirada ka imanaya macmiilka. Iftiiminta midabku had iyo jeer waa caddaan, casaan, iyo jaalle, adigu kaligaa waad ku qasmi kartaa. Handarraabbadeedii iyo lowskii waxaa loogu talagalay in lagu dhejiyo waardiyihii ...